यी दुइ युवतीको बारेमा जब यस्तो रहस्य खुल्यो……. « गोर्खाली खबर डटकम
यी दुइ युवतीको बारेमा जब यस्तो रहस्य खुल्यो…….
२०७७ भाद्र ११ गते बिहिवार प्रकाशित
अफ्रिका ८ नोभेम्बर- बाल्यकालमा नै छुटिएका दुई दिदीबहिनीको १७ वर्ष पछि सेल्फीले भेट गराइदिएको छ । जुम्ल्याहा दिदीबहिनीको रुपमा स्थानिय केपटाउनस्थित एक अस्तातालमा जन्मीएका उनीहरु जन्मीएको तिन दिनमै एक अर्कासंग छुट्टिएका थिए । दुई दिदीमध्ये बहिनीलाई नर्सले चोरेर बेचेकी थिईन।
यो घटना दक्षिण अफ्रिकाको हो । नर्सले चोरेर स्थानियलाई नै बेचेका कारण संयोगले दुवै जना स्कुल जाने भएपछि एउटै स्कुलमा भर्ना हुनपुगे । कुनै चलचित्रको दृश्य जस्तै लाग्ने उक्त घटना अहिले समाजिक सञ्जालमा भाइरल भईरहेको छ । स्कुलमा संगै भर्ना भएका उनीहरुको अनुहार मिल्दै जादा साथीहरुले पनि दुई जनाबिच कुनै नाता भएको अनुमान लगाउने गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय समाचारहरुमा जनाइए अनुसार दिदीबहिनी जस्तै देखिनेबारे सबैले चर्चा गरिरहदा एक दिए दिदीले सेल्फि खिचेर आफ्नी आमालाइ देखाउदा घटनाको रहस्य खुलेको हो ।
उनले आफ्नी आमालाई उक्त फोटो देखाएपछि उनकी आमाले अस्पतालबाटै उनकी बहिनी हराएको खुलासा भयो । घटना पश्चात दुबै दिदी बहिनीको रगत परिक्षण गर्दा आफ्नै दिदीबहिनी रहेकोे पत्ता पृष्टी भएपछि सबै आचार्यमा परेका छन् ।
डिएनए टेस्टबाट नर्सले बच्चालाई चो’रेर बेचेको प्रमाणीत गराइदिएको छ । उक्त प्रमाणकै आधारमा ति युवतीको परिवारले त्यहाँको प्रहरीमा उ’जुरी दिएका थिए । उ’जुरी पश्चात प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त बच्चा बेच्ने नर्सलाई १० बर्षकोलागि जेल स’जाय तोकिएको छ ।[
स्थानीयले हाने मुक्का बुटवलका मेयरलाई पहिरो अवलोकन गर्न पुगेका (भिडियो हेर्नुस्)
जम्मा ४ किलो वजन भएको विश्वको सबैभन्दा सानो गाई , देख्दा सबै परे अचम्मित
तपाईंको, बच्चाको उचाई बढेन ? खानामा समावेश गर्नुस् यस्तो १० चीज, जसले दिन सक्छ उत्कृष्ट नतिजा !